Ndiza a Isitshayina guy kwi-China. Ndifuna enye a Isijapanese kubekho inkqubela. Indlela unako mna kuphunyezwe imbono yam? Ividiyo Dating
Ndinga ukuphonononga kutheni ufuna oku. Ukuba akunazo othile umntu engqondweni, ngoko ufuna attracted ukuya ingcamango okanye stereotype a Isijapanese kubekho inkqubela. Engazi kakuhle Isijapanese abantu kuthetha ukuba oku ikakhulu yakho intloko. Ukuthelekisa Isijapanese girls uza mhlawumbi hayi fit kanye kanye kunye ntoni ve yakhelwe phezulu kwi-ingqondo yakho. Abaninzi kwabo kuya kuba kakhulu ezahlukileyo ukususela kweli, kwaye oku kuza kwenza ukuba ufuna conflicted ukuba sekhe umhla a Isijapanese kubekho inkqubela. Ungafumana i-fact neeyantlukwano sizathu zona iingxaki, nkqu ukuba babe aren t emvelo iingxaki. Ndicebisa approaching romance nge-i-vula ingqondo. Kuba vula ukuba ukufunda malunga umntu kwaye kwezabo eyodwa qualities. Yintoni yenza kubo laugh. Yintoni izinto ngabo obulungileyo ekuhlaleni? Yintoni kokuba ngenene passionate malunga? Ntoni baya kwenza ukuba annoys kuwe (kwaye kangakanani)? Endaweni uzama ukufumana umntu ukuhlangabezana umfanekiso wakho, zama sifunise njani ubomi bakho unako mesh kunye indlela ukuthelekisa umntu. Omnye bahlobo bam watshata a Isijapanese kubekho inkqubela.
Wenza usiba abahlobo kunye Isijapanese xa wayeneminyaka ngxi ngowe-junior phezulu. Baya exchanged iileta kwaye senza njengoko abahlobo? musa t nokwazi lonke ibali. Ekugqibeleni, ngowe-wakhe thirties, zonke a sudden, yena wathi, nathi waba owenza ukuba Isijapanese.
Kwaye baya kuba intombi ngoku
Yintoni enika umdla kukuba umhlobo wam akubonakali t kuthetha Isijapanese wakhe, Isijapanese umfazi akubonakali t kuthetha Isitshayina, baya thetha ngamnye ezinye ngesingesi. Nosapho lwakhe ngu-hayi otyebileyo kodwa lohlobo eliphakathi iklasi enye. Nangona kunjalo, omnye nto phetshana ukuba ukho a javelin athlete, mde kwaye handsome ngathi i-sunshine.
Ukufunda ulwimi lokuqala
Xa ukhethe izakhelo phantsi, yiya fumana Isijapanese, iforam (uqinisekise ukuba ubani. phezulu ummandla) kwaye oko kuya kude kube abantu yima ubizo kuwe uneducated. (Musa t cheat yi-ebaxelela nisolko s somlomo)
← Zeziphi ezinye iindlela kuba i-western umntu ukuhlangabezana a eliphakathi-iklasi Isitshayina-Isithai kubekho inkqubela kuba ezinzima budlelwane kwi-i-bangkok. Ividiyo Dating
Phezulu Iindawo Kuhlangana Girls kwi-China →